Ambatolampy Nesorina ny talen’ny hetra fa nanao kolikoly
Tsy maintsy tohizana ny fanatsarana ny fiaraha-miasa, indrindra ny eo amin’ny sehatra fampidiran-ketra, hoy ny minisitry ny toekarena sy ny vola Randriamandranto Richard omaly.
Rehefa misy ny tompon’andraikitra tsy manao arak’izay tokony ho izy dia tsy hamindrana fo fa miala avy hatrany, hoy ny tenany. Nisy mantsy tranga nampitaraina ny vahoakan’Ambatolampy afak’omaly ary tsy maintsy nidina tany am-potony mihitsy ireo tompon’andraikitra nijery ny zava-nisy. Tsikaritra tamin’izany fa nisy fanararaotana nataon’ny Talen’ny Ivonketra satria nampiakariny ny hetra aloan’ny olona ary tsy mitovy ny vola aloa sy ny rosia omeny. Hatreto anefa dia mbola tsy nisy mihitsy ny fampiakarana ny hetra ary tsy nisy ihany koa ny fampidirana hetra vaovao na ny fanovana ny firafitry ny hetra tao anatin’ny Lalanàn’ny Tetibola. Fanatsarana fomba fiasa foana hatreto no natao araka ny nambaran’ny minisitra. Noroahina avy hatrany moa io tompon’andraikitra ny hetra any Ambatolampy io araka ny nambarany ary nohamafisiny fa tsy misy famindram-po ho an’ireo tompon’andraikitra ambony tratra manao kolikoly tahaka izany.